नयाँ मिडिया परामर्शदाता - खोजी, सामाजिक, भिडियो र मोबाइल
मार्केटिंग कन्डक्टरहरू ... त्रुटि .. परामर्शदाता
शनिबार, जुलाई २१, २०१। बिहीबार, अक्टुबर 29, 2020 Douglas Karr
जब मैले सुरू गरेँ Highbridge, एक निर्णय लिनु वास्तवमा कम्पनीलाई कसरी ब्रान्डमा ल्याउने थियो। जब म मार्केटिंग र यसको विकासको बारेमा सोच्छु, म प्रायः यसलाई कन्डक्टर र सिम्फनीसँग तुलना गर्दछु। एक सल्लाहकारको रूपमा, म कन्डक्टरको जस्तो हुनु आवश्यक छ, फरक-फरक माध्यमहरू मिसाउन र सही समयमा सही नोटहरू प्रहार गर्न उनीहरूलाई सहयोग पुर्‍याउन, ताकि रणनीति पूर्ण रूपमा प्राप्त भयो।
म गर्न चाहन्न उमेर आफैलाई एक नाम दिएर बजार सल्लाहकार। म आफूलाई कल गरेर आफूलाई सीमित गर्न चाहन्न खोजी सल्लाहकार or सामाजिक मिडिया परामर्शदाता। त्यो भनेको तपाई एक भायोलिन वादक, फ्लोटिस्ट, वा टक्करवादी हुनुहुन्छ भन्ने जस्तो छ। बरु, म आफैलाई अधिक खुलस्त ब्रान्ड गर्न चाहान्छु।
नयाँ मिडियाको मतलब यो होइन कि म पुरानो मिडियालाई वेवास्ता गर्दछु, न भविष्यमा यसले मलाई सीमित गर्दछ। सधैं हुन्छ केही नयाँ नयाँ मिडिया परामर्श मा खोज, सामाजिक, भिडियो, मोबाइल… वा लगभग केहि पाइप तल आउँछ। यसको मतलब यो होइन कि म ती सबै क्षेत्रहरूमा एक विशेषज्ञको रूपमा आफूलाई प्रमोट गर्दैछु। म पहिले नै पार्टनर फर्महरू र एजेन्सीहरूसँग काम गर्दछु जुन ती शीर्षकहरूमा विशेषज्ञता दिन्छन्।
नयाँ मिडिया परामर्शदाताको रूपमा, यसले एक आशा सेट गर्दछ जुन मैले सहयोग गर्न सक्दछु कुनै पनि मिडिया ... र संचार माध्यमहरूमा पछिल्ला घटनाक्रमहरूमा मेरो ग्राहकहरूलाई सिकाउनुहोस्। र मँ सबै नयाँ प्रवृत्तिमा विशेषज्ञता बढाउन र निर्माण गर्ने प्रयास गर्छु। समय समयमा, म भन्छु कि म do सामाजिक मिडिया परामर्श वा खोज परामर्श… तर म ती क्षेत्रहरूमा विशेष रूपमा आफूलाई ब्रान्ड गर्दिन।
कन्डक्टरहरू कुनै पनि एक उपकरणको साथ विशेषज्ञ संगीतकारहरू हुन आवश्यक छैन; जे होस्, तिनीहरू पूर्ण रूपमा बुझ्दछन् कि कसरी प्रत्येक ईन्स्ट्रुमेन्ट लिभेर गर्ने, सबैलाई सँगै मिलेर काम गर्ने, र केहि सुन्दर संगीत बनाउने। यो हो मार्केटिंग अर्केस्ट्रेसन.
धेरै नराम्रो हामी आफैले मार्केटिंग कन्डक्टरहरू बोल्दैनौं!
यहाँ केहि सुन्दर मार्केटिंग संगीत बनाउन को लागी छ!
टैग: ब्यालेन्ससञ्चालककोबजार सल्लाहकारमार्केटिंग परामर्शमार्केटिंग अर्केस्ट्रेसनसंगीतवाद्ययन्त्र
WordPress: कसरी भिडियो फेसबक्स पपअप बनाउने